UNancy Pelosi: USomlomo wokuqala weNdlu
UNancy Pelosi (1940-)
U-Nancy Pelosi , Congresswoman waseSithili saseCalifornia, uyabhalwa ngenkxaso yakhe ngemiba efana nokusingqongileyo, amalungelo okuzala abantwana kunye namalungelo abantu. Umgxeki ochaziweyo ongumgaqo-nkqubo weRiphabliki, wayeyintloko ekuhlanganiseni iiDemokhrasi ezikhokelela ekulawuleni iNdlu yabameli kwi-othotho luka-2006.
Yaziwa ngokuba: Owesifazane wokuqala oPhakamileyo weNdlu (2007)
Umsebenzi: Izepolitiki, uMmeli weDemocratical Representative evela eCalifornia
Imihla: Matshi 26, 1940 -
Ozelwe uNancy D'Alesandro, ikamva elizayo uNancy Pelosi wakhuliswa kwindawo yaseNtaliyane eBaltimore. Uyise wakhe nguThomas J. D'Alesandro Jr. Wayekhonza kathathu njengoMeya waseBaltimore nakwiihlanu kwiNdlu yabameli abamele isithili saseMaldan. Wayeyidemokhrasi enamandla.
Unina kaNancy Pelosi nguAnnunciata D'Alesandro. Wayesengumfundi esikolweni somthetho ongazange azalise izifundo zakhe ukuze abe ngumntu ohlala ekhaya ekhaya. Abazalwana bakaNancy bonke beya kwizikolo zamaRoma Katolika baza bahlala ekhaya ngelixa beya kwikholeji, kodwa unina kaNancy Pelosi, ngenjongo yemfundo yentombi yakhe, uNancy waya ezikolweni ezingezizo zonqulo nakwiikholeji eWashington, DC.
U-Nancy watshata nombhanki, uPaul Pelosi, emva kokuba ephuma ekholeji waza waba ngumzi wokuhlala ekhaya ngexesha loonyana bakhe beselula.
Babenabantwana abahlanu. Intsapho yahlala eNew York, yaza yafudukela eCalifornia phakathi kokuzalwa kwabantwana babo besine nabesihlanu.
U-Nancy Pelosi waqala ukuqala kwezopolitiko ngokuzithandela. Wayesebenzela u-candidate oyintloko ngo-1976 waseCalifornia Governor Jerry Brown, esebenzisa inxulunyaniso yakhe yaseMalnland ukumnceda ukuba anqobe iMary yaseprayimari. Wagijima waza wamphola isikhundla seSihlalo seDemocratic Party eCalifornia.
Xa umdala wakhe ephakamileyo esikolweni esiphakeme, uPelosi wagijima kwiCongress.
Uphumelele umncintiswano wokuqala, ngo-1987 xa wayeneminyaka engama-47 ubudala. Emva kokuphumelela inhlonipho yabalingane bakhe emsebenzini wakhe, wanqoba isikhundla sobukhokelo kuma-1990. Ngo-2002, wanqoba unyulo njengeNkqantosi yeNdlu yeNtshonalanga, owowesifazane wokuqala oye wakwenza oko, emva kokuphakamisa imali engakumbi kulolu hlobo lokunyulwa kwabaviwa beDemokhrasi kunanoma yimuphi omunye uMdemokhrasi wakwazi ukwenza. Injongo yakhe yayikuvuselela amandla ombutho emva kokunqotshwa kweCongress ngo-2002.
NgamaRiphabhlikhi ekulawuleni ezo zombini izindlu zeCongress kunye neNdlu ye-White House, uPelosi wayeyingxenye yokucwangcisa inkcaso kwiinkqubo ezininzi zokuphatha, kwakunye nokulungelelanisa ukuphumelela kwiintlanga ze-Congressional. Ngo-2006, iiDemokhrasi zaninzi inxaxheba kwiCongress, ngoko ngo-2007, xa abo baDemokhrasi bathatha iofisi, isikhundla sikaPhelosi sokuqala njengendoda inkokeli yendlu yatshintshwa yaba ngowokuqala uSomlomo weNdlu.
Ukususela ngo-1981 ukuya ku-1983, u-Nancy Pelosi wabamba iqumrhu le-California Democratic Party. Ngomnyaka we-1984, wayekhokela ikomidi elijongene neDemocratic National Convention, eyayibanjelwe eSan Francisco ngoJulayi. Indibano yamisela uWalter Mondale kumongameli waza wakhetha umfazi wokuqala otyunjweyo nawuphi na umbutho omkhulu ukuba asebenzele i-vice-president, uGeraldine Ferraro .
Ngowe-1987, uNancy Pelosi, oneminyaka engama-47, wanyulwa kwiCongress okhethweni olukhethekileyo. Wagijima waya endaweni kaSala Burton owayeswele ekuqaleni kwaloo nyaka, emva kokuqamba igama likaPhelosi njengekhethi lakhe lokuphumelela. U-Pelosi ufungile kwi-iveki emva kwe-oviwo ngoJuni. Waqeshwe kwiiKomiti zoLwabiwo kunye neeKomiti zoBulumko.
Ngonyaka ka-2001, uNancy Pelosi ukhethwa ngumncinci we-democrats kwiCongress, ngowokuqala umfazi wayephethe iofisi yeqela. Ngaloo ndlela wayengummeli weDemokhrasi emva kweNkokheli encinci uDick Gephardt. UGephardt wehla ngo-2002 njengenkokeli encinci yokuqhuba umongameli ngo-2004, kunye noPelosi wakhethwa ukuba athathe indawo yakhe njengenkokheli encinci ngoNovemba 14, 2002. Kwakuyixesha lokuqala umfazi okhethwe ukuba abe ngumphathi weqela leqela leCongress.
Impembelelo kaPelosi yasiza ukuphakamisa imali kwaye iphumelele ininzi yeDemocratic kwiNdlu ngo-2006.
Emva koonyulo, ngoNovemba-16, i-caucus yeDemocratic yanyula uPelilosi ngokumanyanisa ukumenza ibe yinkokeli yayo, ekhokelela indlela yokunyulwa kwakhe ngobulungu ngokupheleleyo kwiNdlu ngoJanuwari 3, 2007, kunye neninzi yamaDemokhrasi, kwisikhundla sikaSomlomo KwiNdlu. Ixesha lakhe liphumelele ngoJanuwari 4, 2007.
Wayengeyena kuphela umfazi wokuqala ukuba abambe i-ofisi kaSomlomo weNdlu. Wayengummeli wokuqala waseCalifornia ukwenza njalo kunye neyokuqala yelifa le-Italy.
Xa ukugunyazwa kwemfazwe yase-Iraq kuqala ukuvota, uNancy Pelosi wayengenye yevoti. Wathatha ukhetho loninzi lwabantu beDemokhrasi ukuphelisa "ukubophezela okuvulelekileyo kwimfazwe engapheliyo."
Wayephikisana kakhulu nesiphakamiso sikaMongameli uGeorge W. Bush ukuguqula inxalenye yoKhuselo loLuntu kwiingxowa-mali kwiimpahla kunye nezibophelelo. Wayechasene nemizamo yamanye amaDemokhrasi ukuba athethe uMongameli uBush ngenxa yokuqamba amanga kwiCongress malunga nezixhobo zokubhubhisa ngokubanzi e-Iraq, ngaloo ndlela kubangela ukugunyazwa kwemimiselo yemfazwe ukuba abaninzi abademokhrasi (nangona kungabikho uPelolosi) bavotele. Iidemokhrasi zeproducts nazo zikhankanyile ukubandakanyeka kweBhitla kubemi be-wiretapping ngaphandle kwesiqinisekiso sokuba isizathu sesenzo sabo esicetywayo.
Ummeli wemfazwe olwaMfazwe uCindy Sheehan wagijima ngokuzimela ngokumelene naye kwisihlalo sakhe seNdlu ngo-2008, kodwa uPelilosi unqobe ukhetho. U-Nancy Pelosi wonyulwa kwakhona njengoSomlomo weNdlu ngo-2009. Wayeyona nto ebalulekileyo kwiinzame zeCongress ezaphumela ekugqibeleni uMthetho we-Care Affordable Care Act.
Xa amaDemokhrasi alahlekelwa ngobuninzi bobuninzi be-filibus kwi-Senate ngo-2010, uPelilosi wamchasa isicwangciso sika-Obama sokuphula umthetho osayilwayo kwaye adlulise ezo ndawo ezingadlula kalula.
U-Pelosi wabuyisela ukhetho kwakhona kwiNdlu ngokulula ngo-2010, kodwa iidemokhrasi zalahlekelwa zihlalo ezininzi kangangokuthi nazo zalahleka amandla okonyula uSomlomo weNdlu yeqela labo. Nangona kukho inkcaso phakathi kweqela lakhe, wakhethwa njengeNkokeli yeDemocraticity Leader kwiCongress elandelayo. Uye wabuyiselwa kuloo ndawo kwiiseshoni zengqungquthela yeCongress.
Ekhethiweyo Nancy Pelosi Iingcaphuno
• Ndiyaziqhenya kakhulu ngobunkokeli bam oDemokhrasi kwiNdlu yabameli kunye nokuziqhenya kwabo ukwenza imbali, ukukhetha ibhinqa njengenkokeli yabo. Ndiyaziqhenya ngokuba sinobunye kwiqela lethu ... Sicacile kwisigidimi sethu. Siyazi ukuba ngubani thina njengoDemocrats.
• Umzuzu wembali weCongress, ngumzuzu wembali wabesifazane baseMelika. Yisixa esilinde iminyaka engama-200. Asizange siphumelele ukholo, silinde kwiminyaka emininzi yomzabalazo ukufezekisa amalungelo ethu. Kodwa abafazi babengazange balinde nje kuphela, abafazi babesebenza, bengalokothi balahlekelwe ukholo esasilisebenzela ukusikhulula isithembiso saseMelika, ukuba bonke amadoda nabasetyhini badalwa bilingana. Kuba zethu iintombi kunye nabazukulwana bethu, namhlanje siye siphule i-marble ceiling. Ngeentombi zethu kunye nabazukulwana bethu, isibhakabhaka ngumda. Nantoni na eyenzekayo kubo. [NgoJanuwari 4, 2007, kwintetho yakhe yokuqala kwiCongress emva kokunyulwa kwakhe njengowesifazane wokuqala uSomlomo weNdlu]
• Kuthatha umfazi ukuba ahlambulule iNdlu. (2006 CNN interview)
• Kumele ugxobhoze i-swamp ukuba uya kulawula abantu. (2006)
• [Amademokhrasi] abazange abe neyayilwayo kumgangatho we-12 iminyaka. Asikho apha ukuba sihlambulule malunga nayo; siya kwenza ngcono. Ndizimisele ukulungelelanisa. Andizimisele ukunikela i-gavel. (Ngo-2006 - ekujonge phambili ukuba nguSomlomo weNdlu ngo-2007)
• iMelika kufuneka ibe kukukhanya kwihlabathi, kungekhona nje umkhosi. (2004)
• Baya kuthatha ukutya emilonyeni yabantwana ukwenzela ukuba banike iirhafu kwizinto ezicebileyo. (malunga namaRiphabliki)
• Andizange ndigijime njengowesifazana, ndaphinda ndagijima njengomongameli onobuchule kunye nomthetho-mthetho. (malunga nolonyulo lwakhe njengombutho weqela)
• Ndaqaphela kwiminyaka engaphezu kwe-200 yembali yethu, ezi ntlanganiso zenzeke kwaye ibhinqa alizange lihlale kule tafile. (malunga nokuhlangana namanye amaqumrhu e-Congressional kwiintlanganiso zekusasa ze-White House)
• Ngokukhawuleza, ndandiva ngathi uSusan B. Anthony, uLucretia Mott, u- Elizabeth Cady Stanton - umntu olwabalaseleyo ilungelo lokuvota kunye nokuxhotyiswa kwabasetyhini kwezopolitiko, kwimisebenzi yabo, nakubomi babo- -kukhona apho kum egumbini. Abo bafazi bebodwa abaye benza ukuphakama okukhulu, kwaye kwakunjengokuba babethi, Ekugqibeleni, sinesihlalo etafileni. (malunga nokuhlangana namanye amaqumrhu e-Congressional kwiintlanganiso zekusasa ze-White House)
• U-Roe u-Wade usekelwe kwinqanaba elibalulekileyo lomfazi kwi-yangasese, ixabiso abalindileyo baseMerika. Kwakusekwa ukuba izigqibo malunga nokuba nokuba nomntwana azifanelekanga kwaye akufanele ziphumle kunye noorhulumente. Ibhinqa-ngokubonisana nentsapho yakhe, ugqirha wayo, kunye nokholo lwakhe-lufaneleke ngokufanelekileyo ukwenza eso sigqibo. (2005)
• Sifanele sihluke ngokucacileyo phakathi kwembono yethu yexesha elizayo kunye nemigaqo-nkqubo ephezulu eyenziwa ngabaRiphablikhi. Asikwazi ukuvumela amaRephabliki ukuba enze ngathi awabelana ngokubaluleka kwamanani kwaye emva koko ayawuthathela imithetho ngokuchasene nalawo maxabiso ngaphandle kwesizathu.
• iMelika iya kuba yindawo ephephile xa sinciphisa amathuba okuhlaselwa kwamaphekula kwelinye iidolophu zethu kunokuba sinciphisa inkululeko yabantu bethu.
• Ukukhusela iMelika ukusuka ebukumkanini kufuna okungaphezulu kokuphela kwesisombululo, kufuna isicwangciso. Njengoko sibonile e-Iraq, ukucwangciswa akusiyo i-suit Administration eqinile.
• Wonke amaMerika anetyala kwimpi yethu ngenxa yobungqina babo, ukuthanda kwabo, kunye nomnikelo abazimisele ukuwenzela ilizwe lethu. Kanye njengoko amajoni ethu athembise ukuba angashiyi namnye emva kwidabi, asimele sishiye umkhosi emva kokuba abuyele ekhaya. (2005)
• Amademokhrasi awazange axhumane kakuhle nabantu baseMerika ... Silungele iseshoni esilandelayo yeCongress. Silungele ukhetho olulandelayo. (emva koonyulo luka-2004)
• AbaRiphabhlikhi babengenalo ukhetho malunga nemisebenzi, ukunakekelwa kwezempilo, imfundo, indawo, ukhuseleko lwesizwe. Babenomnyulo malunga neengxaki zomhlaba kwilizwe lethu. Baxhaphaza ubuhle babantu baseMerika, ukuzinikela kwabantu abanokholo ekupheleni kwezopolitiko. Amademokhrasi aya kuvimbela iBhayibhile ukuba banyulwa. Cinga ukunyeliseka kwaloo nto, ukuba iphumelele amavoti. (Ukhetho luka-2004)
• Ndiyakholelwa ukuba ubunkokeli bomongameli kunye nezenzo ezithathwe e-Iraq zibonisa ukungaphumeleli ngokolwazi, isigwebo kunye namava. (2004)
• UMongameli usikhokele kwimfazwe yase-Iraq ngesiseko seengxelo ezingenagunya ngaphandle kobungqina; wavuma imfundiso eqhelekileyo yemfazwe yangaphambi kweempembelelo engakaze yenziwe kwimbali yethu; kwaye wahluleka ukwakha ukuhlanganisana kwehlabathi lwangempela.
• Ukuboniswa kukaMnu DeLay namhlanje kwaye ukuphelelwa kwakhe kokuziphatha okuphindaphindiweyo kuye kwazisa intlonelo kwiNdlu yabameli.
• Simele siqiniseke ukuba yonke ivoti ephoswe yivoti ebalekile.
• Kwakukho iintlekele ezimbini kwiveki ephelileyo: kuqala, inhlekelele yendalo, yesibini, inhlekelele eyenziwe ngabantu, inhlekelele eyenziwe yimpazamo eyenziwe ngu-FEMA. (2005, emva kwesiphepho uKatrina)
• Ukhuselo lwezeNtlalo aluzange luphumelele ukuhlawula iintlawulo ezithembisiwe, kunye namaDemokhrasi aya kulwela ukuqinisekisa ukuba iiRephablikhi aziphenduleli inzuzo eqinisekileyo kwibala lokuqinisekisa.
• Si lawulwa ngummiselo. UMongameli unquma ngomfanekiso, uyithumela kwaye asinakufumana ithuba lokubheka oko ngaphambi kokuba sibizwe ukuba sivote kuyo. (Septemba 8, 2005)
• Njengomama nogogo, ndicinga ukuba 'ingonyama.' Uya kusondela iibhubhu, ufile. (Ngo-2006, malunga neRiphabhlikhi yokusabela kwangaphambili kwiingxelo zoNxibelelwano lukaMark Foley kunye nephepha leNdlu)
• Asiyi kuba yi-Swift Boated kwakhona. Hayi ukhuseleko lwesizwe okanye nayiphi na into. (2006)
• Kum, iindawo zam ebomini ziya kuhlala ziphakamisa lwam intsapho. Luvuyo olupheleleyo lobomi bam. Kum, ukusebenza kwiCongress kukuqhubela phambili.
• Kwintsapho endikhuliswe kuyo, uthando lwelizwe, uthando olujulile lwecawa yamaKatolika, kunye nothando lwentsapho lwaluyimilinganiselo.
• Nabani na owake wambambisana naye uyazi ukuba angangcolisi nam.
• Ndizikhukhumeza ngokubizwa ngokuba yi-liberal. (1996)
• Abini babini kwisithathu abakwaziyo ukuba ngubani mna. Ndiyabona ukuba njengamandla. Oku akusiyo kum. Ku malunga namaDemokhrasi. (2006)
Malunga noNancy Pelosi
• Ummeli uPaul E. Kanjorski: "UNancy uluhlobo lomntu ongavumelani nalo ngaphandle kokungavumelani."
• Umlobi wezandla zikaDavid Firestone: "Ukukwazi ukuvuya xa ufikelela kwi-jugular kuyimpawu ebalulekileyo kwezopolitiko, kwaye abahlobo bathi uNksz. Pelosi ufunde kulo mnye wabaphathi bezopolitiko kunye nabalinganiswa bexesha langaphambili."
• INyana uPaul Pelosi, Jr: "Ngamalungu amahlanu, wayenomama wamagumbi emoto ngomntu ngamnye ngosuku lweveki."
UBawo, uTomas D'Alesandro, Jr., wayeyi- Roosevelt Democrat kunye noorhulumente wexesha eli-3 waseBaltimore, owokuqala waseMelika wase-Italiya ukuba afake loo ofisi
Umama waya esikolweni somthetho
UMzalwana, uTomas D'Alesandro III, wayengumphathi weBaltimore 1967-1971
UNancy Pelosi kunye nomyeni kaPawulos banabantwana abathathu, uNancy Corinne, uChristine, uJacqueline, uPaul no-Alexandra.
UNancy Pelosi waqalisa umsebenzi wokuzithandela wezopolitiko xa umncinane wakhe eqala isikolo; wakhethwa kwiCongress xa umncinane wakhe ephakamileyo esikolweni esiphakeme
Ezi zinto eziMnandi zifanele zibe yi-Glitch Kwi-Matrix